အန်​တီ​လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » အန်​တီ​လေး	10
Posted by ムラカミ on Feb 22, 2015 in Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary | 10 comments
​မောင်​ဂီ့ ကို တ​ကောင်​ကြွက်​များ မှတ်​သလား
ညင်းညင်း ရွာထဲမယ်​ တ​ကောင်​ထဲ ဒါမျိုးမ​ကြောက်​လို့ ရွာရိုး​လျောက်​​နေတယ်​များ မှတ်​သလား
ရွာထဲမယ်​ ကျုပ်​ အမျိုး ရှိသဗျ ရှိဆို ကျုပ်​​ဒေါ်​လေး​လေ
​မောင်​ဂီ့ အမျိုးပီပီ ဒင်းကလည်း ​ပေါင်းရသင်းရခက်​သဗျ
ဆစ်​ဂ​နေချာ အေ​န နဲ့က ပါးမှာ အေ​ပေါက်​​ကြီးနှစ်​​ပေါက်​နဲ့ဗျ
အသက်​က ဘတ်​​နေ​ပေမယ့်​ အရွယ်​တင်​တုန်းဗျ
တင်​မေ​ပါ့အေ ရွာ့ အဆဲချန်​ပလုံ ဇာယိ တို့ မွသဲတို့လို ဖရုသ၀ါစာကို ဂါထာလိုရွတ်​​နေသူမှမဟုတ်​တာ
အဲ တခုပဲ ရှိတယ်​ သူရိချင်​ရင်​ ​ကျော့်​ကို ဆြာ ​ခေါ်​လေ့ရှိတယ်​
ပီးရင်​ ​ကောင်း​ကောင်း သမ​တော့တာပဲ
ဒင်းလည်း ကျန်​ကိုယ်​​တော့်​ ပိတ်​သတ်​ပါပဲ
ကြိုက်​မယ့်​လူမစိလို့ ကွကိုယ်​ ဒတ်​ပုံရိုက်​ မှန်​ကျိကြိုက်​​နေရတဲ့ ဘွပါလို့ အရပ်​လည်​​ပြောမိရင်​လည်း တညိုးဗျာ
​နောက်​လည်း လုပ်​ပါဝူးဆိုတာ ယုံပါဗျာ
အဲ့ အန်​တီ​လေးက တ​ယောက်​တည်း အကြွားထူသ​ဗျ
သူ့ဗိုက်​ထဲ ငါး​တွေပြည့်​​နေပီလို့ကြွားလား ကြွားရဲ့
အလင်းဆက် says: အန်ကယ်လေး ဆိုပြီး ရွာထဲ နာမည်တစ်သိန်းလောက်နဲ့လူဂျီးအကြောင်း
အတင်းရော အဓမ္မရော ပြောရ ကောင်းမလား တွေးမိ
ခင်ဇော် says: အန်တီလေးကို ပြောလိုက်ပါအူးးး
ဖဘရဲ့ ဆာ့ချ ဘောက်ထဲမှာ ခင်ဇော်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် တွေ့ပါတယ်လို့။
ဘလော့စရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူးလို့ နော်။
black chaw says: အရွယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ အန်တီလေးကို
မြစပဲရိုး says: အလိုလေး။
အဒေါ် ကို ဘန်းပြပြီး ပိုမိုက်ပြတော့ မယ်ပေါ့။
မင်းက “တကောင်ကြွက်” ဝုတ်ပါဝူး။
lol:-))))))))))))))))))))))))))))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကြောင်က တူလေးခေါ်သွားမှာ မကြောက်ဘူးလား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ဘူလဲငင်….
Mr. MarGa says: အဲ့ အန်တီလေး
ခင်ဇော် says: တညား မဘလော့ပါဘူး ဂျား ရဲ့။
Mike says: .မသိဘု
တောင်ပေါ်သား says: တူကလေး မောင်ဂီ
အန်တီဆိုတာ ဘူလဲဟင် ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.